Axmed Madoobe oo weli ka dhaaranaya Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Axmed Madoobe oo weli ka dhaaranaya Kismaayo
Mareeg.com: Madaxa Maamulka KMG ah ee JUBA, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa weli ka hanjabaya magaalada Kismaayo, isagoo sheegaya inuu weerar ku yahay deegaanada Alshabaab ka maamulaan Jubooyinka.
Axmed Madoobe, ayaa markaan sheegaya in maadaama laga baxay bisha Ramadaan ay qaadayaan weeraro ay Alshabaab uga saarayaan deegaanada Jubooyinka oo ay ka mid yihiin hareeraha Kismnaayo.
Sheekh Axmed Madoobe ayaa ku goodiyay inay u diyaar garoobeen dagaal kama dambeys ah oo Al Shabaab looga saaraayo dhulka ay weli ka joogto Gobolada Jubbooyinka.
Sidoo kale, dadka deegaanada Jubbooyinka, ayaa waxa uu ku booriyay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah Ururka Al Shabaab, si loo soo afjaro dhibaatada ay ku yihiin bulshada, sida uu yiri.Axmed Madoobe ayaa Alshabaab ku eedeeyey iney dadka mar kasta ka uruuriyaan xoolo farabadan oo ay ku sheegayaan seko, wuxuuna xusay iney doonayaan iney culeyskaas ka dulqaadaan dadka shacabka ah.
Ma aha markii ugu horreysay ee Axmed Madoobe u hanjabo Alshabaab, hase ahaatee waxaa ciidamadiisu dhaafi la’yihiin magaalada Kismaayo, waxaana Alshabaab magaalada kusoo qaadaan weeraro toos ah iyo dadban.